Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Maqaal Xiiso Badan Qofkeed Ku Masaali Lahayd Yusur? W/Q:- Axmed-Assad
Maqaal Xiiso Badan Qofkeed Ku Masaali Lahayd Yusur? W/Q:- Axmed-Assad
Oday: Adeer sawirkaa xafiiska kuu surani ma xaaskaagiibaa?
Aniga: Maya Adeer, waa Yusur Abraar
Odaygii: Oo adeer haddaa maxaa isu tihiin?
Aniga: Adeer, waa halyeeyad Soomaaliyeed, laakiin qaraabo ma nihin!
Odaygii oo yaabban: Oo adeer cimrigaasaan jooggaaye halyeeyaddan aanan maqlin maxay ahayd? Sawirkii buu ku soo dhawaaday bal inuu garto, suu ye: waligayba tan mana arag, mana maqal. Dumar la leeyahay waa halyeeyad oo aan Xaawo Taakadii 100 shillin ku sawirnaan jirtay ahayn annagu maanu maqal.
Aniga: Adeer waa halyeeyadda qarnigan cusub!
Odaygii: (Qosol-aan daacad ka ahayn) War illeen annagaa yaab aragnay! Oo adeer maxay ku mutaysatay? Aniga: Xoolaha masaakiinta iyo danyarta ayay difaacdaa.
Odaygii: Haaaaa, oo ma yarta Soomaali Kumuyuunitiga u shaqaysee turjubaanka ah baa? Aniga: (qosol) Maya, maya, maya adeer, halkan ma joogtee waa gabadh madax ahayd oo Soomaaliya joogtay.
Odaygii oo ka yara xun in aanaan xogta si waafi ah uga dhergin: Waar heedhe wax uun baad sogordohdaaye, si wanaagsan wax noogu sheeg! Maxay qabatay noo sheeg dee! Aniga: Adeer, Yusur markaan u fiirsaday caddaaladdeeda iyo geesinnimadeeda waan waayay qof Soomaali ah oo aan ku masaallo.
Mar waxaan is iri ku masaal Axmed Guray iyo Sayidkii, haddana way isu kay qaban waayeen. Waxaan is iri ku masaal Xaawo Taako haddana way ii qaban wayday. Goor dambe ayaan xusuustay Faarax Maxamed iyo Maxamed Cabdulle.
Odaygii: Ma Faarax Maxamed! Ma Walaalkaa baad halyeey nooga dhigaysaa? Oo Sayid Maxamed Cabdulle Xassana sow taad lahayd way isu kay qaban waayeen goormaad haddana is rogtay? (Nin agtiisa fadhiyay ayuu hadalka u weeciyay) waar dee malaa kani wuu soo yar xayd-xaydanayaa! (waalanayaa).
Aniga: (qosol yar), Adeer walaalkay halyeey wuxuu u yahay qoyskayaga, laakiin waxaan ka wadaa Faarax Maxamed (Ina Sanwayne). Waa caaddilkii Ina Sanwayne ee ku markhaati furay soddogii Cashuur oo uu inan la’yaal u ahaa (magan xidid ah).
Mar ay Cashuur hal baadi ah isku qabsadeen nin socoto ah ayuu ninkii qalaad hashii u xukumay, waana ninka yiri: Gartu Malaha Soddog, Seeddi iyo Saaxib e, Gari Allay Taqaan! Wuxuu kaloo yiri: Walaalkaa markhaatiga ku fur, magtana la bixi!
Odaygii: Waar anaga dhagjar (lucture) hanoo akhiriyin Ina Sanwayne ku saabsan oo waanu kaa badinnaaye, Maxamed Cabdulle na kumuu ahaa? Waxaan maqli jiray waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray! Anigii buu Ina Sanwayne oo aan maqlayay illaa Siigi-Case (abaar qarnigii 20aad ka dhacday waqooyiga) iiga sheekaynayaa! buu yiri.
Aniga: Adeer, Maxamed Cabdulle Xalane waa geesigii markii ciidankii Soomaalida ee Togwajaale xabashidu ku soo duushay 1964 arkay calankeennii oo in yar loola saaran yahay, ka dibna isagoo calankii doonaya inuu badbaadiyo dhaawacmay, oo haddana isagoo dhiig baxaya calankii la soo gurguurtay oo dhufayskii Soomaalida keenay. Waxayna Xalane naftu ka baxday isagoo leh “cadowgu bir maahee, burburiyaay!”
Odaygii: Waar haddaan gartay! Walaahi Hure Dhikil (Hure-Buqus) barigii billad geesida la siiyay, buu ninkaasi wacdaruhuu dhigay nooga sheekeeyay, oo dee waa ninkii xeradii Xamar ku taalay ee ciidamadana loogu magac daray. Isagana garanaye. Tan yar maxaad raggaa ugala mid dhigtay?
Aniga: Adeer, Yusur waa gabadhii madaxda ka ahayd Bangiga Dhexe ee Soomaaliyeed, markaa shirkad Maraykan ah oo tuugo ah oo loo dirsaday inay lacagahii Soomaalida debedaha u yaallay soo …….
Taleefoon: gararam gararam….
Odaygii: Haloow, haa waan ku maqlaa…..hee…. waanu ku raagsanayaa? Waar mid halkana oo mixnad soconaysa ah baan maanta afka uga galaye in yar ii dulqaata.
Aniga: Adeer anigana shaqo badan baa ii taalla, adigana waataa lagu raagsadaye maxaa kaloon kuu qabtaa?
Odaygii: Waar bal wax yar i suga (taleefoonkii buu hoos u yara laalaadiyay). Waaryaahee, wallaahi gabadhaa aad sheegayso magaceeda idaacaddaan ka maqlay oo waa qof libaaxad ah!